I-Camola e-Bluefields - I-Airbnb
Wamkelekile kwi- "Camola" e-Bluefields. Le ndlu ikwiikhilomitha eziyi-5 ukusuka e-Bluefields Beach kunye neekhilomitha eziyi-10 ukusuka kwisixeko esikhulu saseSavanna la Mar. Siyakumema ukuba uve ingcamango yethu "yokuhlala Kwilizwe lase-Jamaica" apho uphumle kwaye uxolo lukulindele khona.
Sisebenzisa ngokupheleleyo indlu kunye nendlu kunye nezinto ezinokusetyenziswa ezidweliswe ngokuzenzekelayo kwi-Airbnb. Sinikezela ngezinye iinkonzo eziliqela kwiindwendwe zethu xa zicelile, sazise ukuba yintoni oyifunayo kwaye siya kusoloko sizama ukukuququzelela! sinamagumbi amane amahle navulekileyo amabini anomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kunye namanye amabini afakwe iifeni zesilingi.
Indawo yethu ngenye yezona ndawo zibalaseleyo eWestmorcountry, ekwindawo esezantsi kweenduli ezinemizila epholileyo kunye nokufikelela kuzo zonke izinto ezifumaneka eWestmorcountry. Uza kube ukwindawo entle esezilalini kodwa kwimizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto usiya elunxwemeni nakwiindawo zokutyela. Iivenkile kunye neevenkile zokutyela eSavanna la Mar yimizuzu eyi-15 ngemoto. Unokuceba usuku lokuphuma eNegril okanye eMontego Bay ekumgama wemizuzu eyi-45.